Fanehoan-javatra (fitsipiteny) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Faneho)
Ny faneho na fanehoan-javatra dia toetra ara-pitsipiteny ananan'ny teny amin'ny sokajin-teny sasany izay ahafahan'ny mpiteny maneho ny fomba fijeriny momba ny fivoaran'ny ny asa na ny toetra resahina (fanombohany, fizotrany, fahavitany sns) ao amin'ny matoanteny na ny teny rehetra mety hatao entimilaza. Ny mariky ny filazam-potoana amin'ny fiteny sasany dia mariky ny fanehoan-javatra ihany koa ka mahatonga ireo fiteny ireo hoatry ny manana filazam-potoana maro dia maro. Ny fiteny sasany tsy manana filazam-potoana fa fanehoan-javatra fotsiny, isan'izany ny fiteny semitika toy ny fiteny hebreo izay mampifanohitra ny "fanehoan-javatra efa" amin' ny "fanehoan-javatra tsy efa". Ireto misy karazana fanehoan-javatra fahita amin'ny fiteny maro: ny fanehoan-javatra efa (sy ny mifanohitra aminy); ny fanehoan-javatra mitohy (sy ny mifanohitra aminy); ny fanehoan-javatra mifintina (sy ny mifanohitra aminy); ny fanehoan-javatra mifetra (sy ny mifanohitra aminy).
1 Ireo karazana fanehoan-javatra fahita matetika
1.1 Fanehoan-javatra efa sy tsy efa
1.1.1 Fanehoan-javatra efa
1.1.2 Fanehoan-javatra tsy efa
1.2 Fanehoan-javatra mifintina sy mivelatra
1.2.1 Fanehoan-javatra mifintina
1.2.2 Fanehoan-javatra mivelatra
2 Sokajin'ny endrika fanehoan-javatra
2.1 Ny fanehoan-javatra zanateny sy tsirinteny
2.1.1 Ny fanehoan-javatra tsirinteny
2.1.2 Ny fanehoan-javatra zanateny
2.2 Fanehoan-javatra reniteny
2.2.1 Ao amin'ny fiteny frantsay
2.2.2 Ao amin'ny fiteny anglisy
2.3 Fanehoan-javatra ara-keviteny
2.3.1 Ao amin'ny fiteny malagasy
2.3.2 Ao amin'ny fiteny frantsay
2.3.3 Ao amin'ny fiteny rosiana
2.3.4 Ao amin'ny fiteny espaniola
Ireo karazana fanehoan-javatra fahita matetikaHanova
Ireto ny karazana fanehoan-javatra fahita matetika amin'ny fiteny maro:
Fanehoan-javatra efa (sy ny mifanohitra aminy);
Fanehoan-javatra mifintina (sy ny mifanohitra aminy).
Fanehoan-javatra efa sy tsy efaHanova
Maro ny fiteny izay ahitana ity fifanoheram-panehoan-javatra ity ka isan'izany ny fiteny hebreo izay tsy manana mari-pilazam-potoana milaza fotoana tokoa.
Ny fanehoan-javatra efa dia milaza fa tapitra tateraka ilay asa na toetra lazain'ny matoanteny ka efa mihoatra ara-potoana ny fangitra voafaritra ka noho izany tsy misy intsony, nefa ny vokany no mety mbola ho eo. Matetika mifangaro amin'ny fanehoan-javatra mifintina ny fanehoan-javatra efa ao amin'ny fiteny tsy manana marika hanavahana izany. Amin'ny teny frantsay dia ireo mari-potoana tambatra (misy matoanteny mpanampy) no maneho izany.
Ny fanehoan-javatra tsy efa dia milaza fa tsy tapitra ilay asa na toetra lazain'ny matoanteny ka mbola tsy mihoatra ara-potoana ny fangitra voafaritra. Matetika mifangaro amin'ny fanehoan-javatra mivelatra ny fanehoan-javatra tsy efa ao amin'ny fiteny tsy manana marika hanavahana izany. Amin'ny teny frantsay dia ireo mari-potoana tsotra (tsy misy matoanteny mpanampy) no maneho izany.
Fanehoan-javatra mifintina sy mivelatraHanova
Ny fanehoan-javatra mifintina dia iheverana hatramin'ny fanombohany ka hatramin'ny fiafarany ny asa na toetra lazain'ny matoanteny. Matetika mifangaro amin'ny fanehoan-javatra efa ny fanehoan-javatra mifintina ao amin'ny fiteny tsy manana marika hanavahana izany. Amin'ny teny frantsay dia ny mari-potoana lasa tsotra (frantsay: passé simple) ao amin'ny filaza tsotra no maneho izany.
Ny fanehoan-javatra mivelatra dia iheverana ny ampaham-potoana isehian'ny asa na toetra lazain'ny matoanteny. Matetika mifangaro amin'ny fanehoan-javatra tsy efa ny fanehoan-javatra mivelatra ao amin'ny fiteny tsy manana marika hanavahana izany. Amin'ny teny frantsay dia ny mari-potoana lasa tsy efa (frantsay: imparfait) ao amin'ny filaza tsotra no maneho izany. Ao amin'io fiteny io ihany dia misahana izany koa ny mari-potoana ankehitriny (frantsay: présent) ao amin'ny filaza tsotra.
Sokajin'ny endrika fanehoan-javatraHanova
Misokajy roa lehibe ny fanehoan-javatra raha ny endriky ny teny ampitany izany no heverina, ka ao ny fanehoan-javatra amin'ny alalan'ny zanateny sy tsirinteny sy ny fanehoan-javatra amin'ny alalan'ny reniteny. Ao koa ny fanehoan-javatra izay tsy hita araka ny endriky ny teny fa araka ny hevitr'io teny io ka atao hoe fanehoan-javatra ara-keviteny.
Ny fanehoan-javatra zanateny sy tsirintenyHanova
Ny fanehoan-javatra tsirintenyHanova
Ireo fanehoan-javatra voatanisa eo aloha dia mety hasehon'ny tsirinteny amin'ny matoanteny (na amin'izay sokajin-teny afaka mitondra ny mariky ny fanehoan-javatra). Mety ho tovona na tovana izany tsirinteny izany ary mety ho mora na sarotra sarahana amin'ny fototeny izany tsirinteny izany.
Ao amin'ny fiteny malagasy
Amin'ny fiteny malagasy dia ampiasaina ho mari-panehoan-javatra ny tsirinteny voa- sy tafa- izay mari-panehoan-javatra efa. Ohatra - ny fahasamihafana misy eo amin'ny matoanteny ao anatin'ny fehezanteny roa manaraka ireto dia vokatry ny fahasamihafan'ny fanehoan-javatra. Marihina koa fa ireo tovona na tovana natao hanehoana fiendrika na fitodika mitovy na mitovitovy dia mety samy hanana ny fanehoan-javatra ambarany avy.
Tanjona lehibe no tratrariko. (= Tsy fantatra na ho tratra na tsia ny tanjona)
Tanjona lehibe no tratrako. (= Efa tratra ny tanjona)
Ao amin'ny fiteny frantsay
Amin'ny fiteny frantsay dia sarotra avahana ny tsirintenin'ny fanehoan-javatra satria miasa ihany koa ho mari-potoana sy mari-pilaza. Izany no mahatonga io fiteny io ho toy ny manana filazam-potoana maro dia maro, ka ohatra amin'izany ny filazam-potoana lasa tsy efa (frantsay: imparfait) mifanohitra amin'ny filazam-potoana lasa tsotra (frantsay: passé simple) izay mari-panehoan-javatra mivelatra sy mari-panehoan-javatra mifintina.
Il travailla la terre de 7 à 12 heures. ("Niasa tany izy hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 12 ora")
Il travaillait encore à 9 heures ("Mbola niasa izy tamin'ny 9 ora").
Ny fanehoan-javatra zanatenyHanova
Ny fiteny sasany dia mampiasa zanateny ho mariky ny fanehoan-javatra manampy (na tsia) ny mari-panehoan-javatra amin'ny alalan'ny tsirinteny. Ohatra amin'izany ny fampiasana mpanampy fanehoan-javatra.
Ny fiteny frantsay dia mampiasa ny matoanteny mpanampy avoir (na être) arakarahin'ny ova-matoanteny lasa ho mariky ny fanehoan-javatra efa. Ny matoanteny mitampody dia mila ny mpanampy être ho mariky ny fanehoan-javatra efa. Indraindray dia sarotra ny hanavahana ny anjara asa fanehoan-javatra sy ny anjara asa mari-potoana.
Tu rentreras à 7 heures ("Hody amin'ny 7 ora ianao": tsy fantatra na efa tonga an-trano na tsia).
Tu seras rentré à 7 heures ("Hotafody ianao amin'ny 7 ora": efa tonga an-trano)
Ce jour-là, elle chanta et dansa ("Tamin'izany andro izany dia nihira izy avy eo nandihy": aloha sy afara)
Ce jour-là, elle chantait et dansait ("Tamin'izany andro izany dia nihira no sady nandihy izy": miseho miaraka).
Ao amin'ny fiteny anglisy
Ao amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina ny mpanampy have arahin'ny ova-matoanteny lasa ho mariky ny fanehoan-javatra efa. Ampiasaina koa ny mpanampy be arahin'ny ova-matoanteny ankehitriny ho mariky ny fanehoan-javatra mitohy na mivoatra.
I drank water after having eaten rice ("Nisotro rano aho rehefa avy nihinam-bary")
I was drinking water when he called me ("Nisotro rano aho tamin'ny niantsoany ahy": eo am-pisotroan-drano).
Azo atao koa ny mampiasa ny tambinteny na kianteny sasany ho mariky ny fanehoan-javatra.
Ny mari-panehoan-javatra reniteny dia matetika matoanteny na tarika matoanteny na sokajin-teny hafa ampiasaina hananterana ny fanombohana na ny famaranana, ny fidirana na ny fivoahana, ny fahataperana na ny fitohizana eo amin'ny asa na ny toetra lazain'ny matoanteny na teny hafa azo atao entimilaza afaka mandray mari-panehoan-javatra. Indraindray dia sarotra ny fanavahana ny anjara asa fanehoan-javatra sy ny anjara asa mari-potoana amin'ny alalan'ireo reniteny ireo.
Ao amin'ny fiteny frantsayHanova
Ao amin'ny teny frantsay, ohatra, dia ahitana ny hoe commencer à ("manomboka") sy finir de ("mamarana") ary ny hoe être en train de ("eo am-panaovana"), raha tsy hitanisa afa-tsy ireo, ka arakarahin'ny filaza tsy mitanisa mba hanehoana ny fanombohana na ny famaranana na ny fitohizan'ny asa na ny toetra lazaina ao amin'ny matoanteny.
Il commence à travailler ("Manomboka miasa izy")
Il est en train de travailer ("Miasa izy" = "An-dalam-piasana izy")
Ao amin'ny fiteny anglisyHanova
Amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina ny matoanteny begin ("manomboka") hilazana ny fanombohan'ny asa na ny toetra ambaran'ny matoanteny.
Ny matoanteny tsirairay dia mitondra fanehoan-javatra ao amin'ny maha reniteny azy izay tsy miseho ety ivelany amin'ny alalan'ny endriny. Izany no fanehoan-javatra ara-keviteny. Misy, ohatra, ny matoanteny manana fanehoan-javatra mifetra sady misy ny matoanteny manana fanehoan-javatra tsy mifetra. Ny fotoana ahafahan'ilay asa na toetra mifandraika amin'ny matoanteny no voafetra na tsy voafetra.
Ny entimilaza mifetra (matoanteny mifetra sns) dia entimilaza ilazana asa na toetra tsy maintsy mifarana, fa ny entimilaza tsy mifetra kosa dia entimilaza ilazana asa na toetra tsy mitsahatra ho azy raha tsy misy hery ivelany (ny mpanao na zavatra hafa) mampitsahatra azy sady azo ampaharetina araka izay azo atao. Tsy ireo roa ireo ihany anefa ny fanehoan-javatra ara-keviteny fa misy maro hafa koa. Matetika dia ny fanahoan-javatra mifintina na efa no mikambana amin'ny fanehoan-javatra mifetra fa ny fanehoan-javatra mivelatra na tsy efa kosa no miaraka amin'ny tsy mifetra.
Ao amin'ny fiteny malagasyHanova
Ao amin'ny fiteny malagasy, ny matoateny hoe teraka, mihoatra, mitelina (afa-tsy hoe averimberina na raikitra) dia mifetra fa ny matoanteny hoe matory, mivelona, mahalala, dia tsy mifetra.
Izany no mahatonga ny matoanteny tsy mifetra frantsay ho mety kokoa raha atao amin'ny filazam-potoana ankehitriny (frantsay: présent) na lasa tsy efa (frantsay: imparfait) ao amin'ny filaza tsotra (frantsay: indicatif) fa ny matoanteny mifetra kosa ho amin'ny filazam-potoana lasa tambatra (frantsay: passé composé) na amin'ny lasa tsotra (frantsay: passé simple). Ohatra, ny matoanteny frantsay hoe prendre ("mandray") dia mifetra fa ny hoe tenir ("mihazona") kosa dia tsy mifetra.
Il a pris ma main. ("Noraisiny ny tanako")
Il prit ma main. ("Noraisiny ny tanako")
Il tient ma main. ("Mihazona ny tanako izy")
Il tenait ma main. ("Nihazona ny tanako izy")
Ao amin'ny fiteny rosianaHanova
Ny matoanteny amin'ny fiteny sasany toy ny fiteny rosiana dia misokajy roa araka ny fanehoan-javatra ara-keviteny fonosiny na dia mbola tsy mivoaka ny sehatry ny maha voambolana azy aza.
идти /idti/ ("mandeha" tsy mifetra) vs пойти /pojti/ ("miainga")
прыгать /prigat´/ ("mitsambikina", tsy voafetra isa) vs прыгнуть /prignut´/ ("mitsambikina indray mandeha").
писáть /pisát'/ vs написáть /napisát'/ ("manoratra")
покупáть /pakupát'/ vs купить /kupít'/ ("mividy")
съедáть /s'edat'/ vs съесть /s'est'/ ("mihinana")
убегáть /ubegat'/ vs убежать /ubižat'/ ("mihazakazaka")
Ampiasaina ireo matoantany voalohany hilazana asa na toetra afaka mitohy lava na miverimberina na mahazatra fa ny matoanteny faharoa kosa ampiasaina hilazana asa na toetra voafetra na miseho indray mandeha.
Ao amin'ny fiteny espaniolaHanova
Ny fiteny espaniola dia manana matoanteny mpanampy izay mitovitovy dika raha tsy heverina ny fahasamihafan' ny fanehoan-javatra ampitainy, dia ny matoanteny ser sy estar izay samy adika amin'ny teny frantsay hoe "être" na ny teny anglisy hoe "be".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanehoan-javatra_(fitsipiteny)&oldid=976792"
Dernière modification le 11 Novambra 2019, à 16:20
Voaova farany tamin'ny 11 Novambra 2019 amin'ny 16:20 ity pejy ity.